पार्टीभित्रको मतभेद नेताहरूले यसरी पोखे - Dainik Nepal
पार्टीभित्रको मतभेद नेताहरूले यसरी पोखे
दैनिक नेपाल २०७५ जेठ ३० गते ६:४८
मलाई गाली गरेर पार्टी बलियो बन्दैन : शेरबहादुर देउवा
गिरिजा र सुशीलजी हुँदा पार्टीमा चुइक्क बोल्न नपाएकाहरुले अहिले बल्ल बोल्न पाएका छन् । शेरबहादुरको विरोध गरेर मात्र अहिलेको चुनौती सामना गर्न सकिँदैन । मलाई गाली गरेरमात्र पार्टी बलियो हुँदैन । कम्युनिस्टहरुविरूद्ध बोल्नुस् मविरुद्ध त बोल्न पाइहाल्नुहुन्छ नी ! नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
नेताहरु सहमति र विधान अनुसार पार्टी चलाउनु भन्नहुन्छ । यो दुईवटै एकपटकमा हुँदैन । कि सहमति अनुसार हुन्छ की विधान अनुसार हुन्छ । आफूलाई चाहिएको बेला सहमति भन्नुहुन्छ । नचाहिएको बेला विधानको कुरा गर्नुहुन्छ । यसरी हुँदैन । निर्वाचनमा सहमतिमै दुई महिना लगाएर टिकट बाँडेका हौं । कोही जित्यौँ कोही हा¥यौँ ।
फेरी हाम्रो विधानले दुईवटकभन्दा बढी सभापति बन्न नपाइने भन्ने छ । मलेसियामा ९२ वर्षका प्रधानमन्त्री भएका छन् । म त कहाँ त्यति भएको छु र ?
पार्टीमा नैतिक शक्ति आवश्यक : रामचन्द्र पौडेल
पार्टी सच्चिुपर्छ । नसच्चिदा कस्तो हालत भएको छ यो हामी सबैले देखेका छौँ । तर, अहिले पार्टीमा एकता आवश्यक छ । पार्टीभित्र न्याय, निष्पक्षता आवश्यक छ । विधानको दायराभित्र पार्टी चल्नुपर्छ । सहमतिमा चल्नुपर्छ । एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ तर, यसका लागि प्रष्ट आधार हुनुपर्छ । हामी कम्युनिस्टसँग लड्नुपर्ने बेलामा हौँ । तर, उनीहरुसँग लड्न हामीसँग कति नैतिक शक्ति छ ? जनताको मन जितेर बलियो हुनुपर्छ । पार्टी सिद्धान्तले जित्ने तर संगठनले हार्ने अवस्था आएको छ यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
हार्न मात्र होइन जित्न पनि जानेका छौँ : विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता
हामी एक निर्वाचनमा हारे पनि अर्कोबाट जित्न जानेका छौँ । सधै यस्तो हुँदै आएको छ । यसको लागि हामीले एकतावद्व भएर अघि बढ्नुपर्छ । भिन्न–भिन्न बाटोमा हिँडेका ओली र प्रचण्डहरू त एक भएका छन् । हामी एउटै थालमा खाएका कांग्रेस नेताहरू किन नमिल्ने ?
पुरानो होइन नयाँ ठाउँमा लानुपर्छ : गगन थापा
कांग्रेसलाई सभापति (शेरबहादुर देउवा) पुरानो ठाउँमा लानुपर्छ भन्नहुन्छ । तर, अब पुरानो ठाउँमा लगेर हुँदैन । नयाँ ठाउँमा लानुपर्छ । १५ साल र ५६ सालमा हामीले बहुमत ल्याउँदा पाएको मत प्रतिशत क्रमशः ३७ र ३८ हो । अहिले पनि हामीले सयमा ३० हाराहारी मत पाएका छौँ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीले ५३ प्रतिशत मत ल्याएका छन् । अब उनीहरुलाई जित्न १५ लाख मत थपेर मात्र पुग्दैन । नयाँ थपिएका मतदातामा पनि बहुमत हासिल गर्नुपर्छ । यसका लागि पार्टीभित्र सहकार्य र संघर्ष गर्नुपर्छ ।